साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कारः छानिए उत्कृष्ट तीन कृति | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कारः छानिए उत्कृष्ट तीन कृति
यो नामावली, वर्षभरिमा नयाँ लेखकहरूले २०७७ सालमा प्रकाशन गरेका २७ पुस्तकबाट छानिएको १० पुस्तकको सूचीबाट छानिएको हो ।
साहित्यपोस्ट प्रकाशित १६ बैशाख २०७८ १७:०१
पहिलो पुस्तक लेखेर नेपाली भाषा साहित्यमा औपचारिक पाइला चालेका लेखकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कारको उत्कृष्ट तीन कृतिहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ । पुरस्कारको राशि ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यो नामावली, वर्षभरिमा नयाँ लेखकहरूले २०७७ सालमा प्रकाशन गरेका २७ पुस्तकबाट छानिएका १० पुस्तकहरूको सूचीबाट छानिएको हो । उक्त दश पुस्तकहरूलाई साहित्यपोस्टसँग आबद्ध पत्रकार, साहित्यकार, सम्पादक र शुभेच्छुकहरूले दिएको नम्बरको आधारमा निर्णायकहरूको टोलीले छानेको हो ।
छानिएका १० कृतिहरूलाई साहित्यपोस्टका विषय सम्पादकहरू, स्तम्भकार एवं समीक्षक गरी १५ जनालाई जिम्मा लगाइएको थियो । उहाँहरूले दिएका नम्बरहरूलाई जोडेर १५ ले भाग गर्दा आउने नम्बरका आधारमा उत्कृष्ट तीन कृतिको छनोट गरिएको हो । साहित्यपोस्टका प्रधानसम्पादक अश्विनी कोइराला भन्छन्, “हाम्रा निर्णायकहरू लेखकको पहिलो पुस्तक नै गतिलो जन्मनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । यी उत्कृष्ट तीनवटा कृतिहरूमध्येबाट पनि सर्वोत्कृष्ट कृतिको छनोट हुने कुरामा सम्पादकीय टिम विश्वस्त छ ।”
छानिएका १० डेब्यु पुस्तकहरूमध्येबाट लक्ष्मण अधिकारीको कथासङ्ग्रह “मर्फिन”, केदार वाशिष्ठको नेपाली भाषा, लिपि, संस्कृति र संस्कारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानात्मक कृति “नेपाल विद्या” र सुरेश बडालको कथासङ्ग्रह “रहर” उत्कृष्ट तीन पुस्तकका रूपमा छनोट भएका छन् ।
“हुन त, उत्कृष्ट तीनको नामवली सार्वजनिक नगरेर सर्वोत्कृष्ट पुस्तकको घोषणा गर्दै वैशाख २५ गते अर्थात् साहित्यपोस्टको पहिलो वार्षिकोत्सवका लागि औपचारिक कार्यक्रमका बीच ताम्रपत्रसहित पुरस्कार अर्पण गर्ने योजना थियो,” कोइराला भन्छन्, “तर कोभिडले खडा गरेका विषम अवस्थामा सो योजना सफल भएन । त्यसै कारणले निर्णायकहरूको सुझावअनुसार हाल उत्कृष्ट तीन पुस्तकको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । वैशाख २५ गते सर्वोत्कृष्ट एक कृतिको घोषणा गरिने छ । र, समयको अनुकूलता र कोभिडको अवस्था हेरी निकट समयमा नै स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गर्दै सीमित महानुभावहरूको भौतिक उपस्थितिमै सर्वोत्कृष्ट कृतिका स्रष्टालाई पुरस्कार अर्पण गरिने छ ।”
पढ्नुहोस्, साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट तीनमा छनोट भएका कृतिका स्रष्टासँग कृति तथा पुरस्कारका विषयमा गरिएको संवादः
१. कथासङ्ग्रहः मर्फिन – लक्ष्मण अधिकारी
तपाईँको पहिलो कृति “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार” का लागि शीर्ष दश पुस्तकमा पर्यो । कस्तो अनुभूत गरिरहनुभएको छ ?
यसले मलाई गहिरो खुसीको अनुभूति गराएको छ, म ज्यादै उत्साहित पनि भएको छु । मेरो कृति मर्फिन २०७७ को अन्तिम महिनामा प्रकाशित भएको हो । अढाइ दशकभन्दा बढी समय मैले पत्रकारिता तथा लेखन कार्यमा व्यतीत गरिसकेको छु । तर पनि मैले एकल लेखनमा आफ्नो कुनै कृति प्रकाशन गर्न सकिरहेको थिइनँ । त्यसका लागि म लामो तयारी, अभ्यास एवं परीक्षण गरिरहेको थिएँ । त्यसकै फलस्वरुप मेरो पहिलो कृतिका रुपमा कथासङ्ग्रह मर्फिन प्रकाशित हुन सकेको हो ।
जीवनमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको मेरो यो कृति प्रकाशित भएको एक महिना नपुग्दै पुरस्कारका लागि शीर्ष दश पुस्तकमा पर्नु मेरो लागि ज्यादै सुखद कुरा हो । त्यसमा पनि साहित्य पोस्टजस्तो लोकप्रिय संस्थाले संयोजन गरी “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार” का लागि शीर्ष दश पुस्तकमा छनौट गर्नुले मलाई हर्षित एवं गौरवानुभूति तुल्याएको छ ।
“साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार” को घोषणाले तपाईँको साहित्यिक यात्रासँग के सम्बन्ध राख्ला ?
निश्चय नै यो घोषणाले मेरो साहित्यिक यात्रासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नै छ । स्कुलका अन्तिम वर्षहरु र कलेजका प्रारम्भीक वर्षहरुमा सोखको रुपमा साहित्य लेखनमा बस्दै गरेको जगले त्यसपछिका दिनहरुमा मूर्तरुप लिन सकेन । जीवन जिउने लडाइँमा होम्मिनुपर्दा साहित्यिक क्षेत्रलाई पत्रकारिता र अन्य कार्यहरुले विस्थापित गरिदिँदा सो क्षेत्र अन्तरमनमा कुण्ठित भएर बस्न पुगेको थियो । अहिले म तिनै कुण्ठाका पोकापन्तेराहरु फुकाउँदै प्रतिबद्धताका साथ साहित्यिक क्षेत्रमा केही स्मरणीय योगदान दिने प्रयत्न गर्दै छु । “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”को लागि शीर्ष दशमा मेरो कृति पर्नुले नै मलाई ठूलो हौसला मिलेको छ र मैले हिँड्न खोजेको बाटो गलत छैन भन्ने भरोसा दिलाएको छ । त्यसमा पनि पुरस्कारकै घोषणा हुन सक्यो भने त ग्राभेल गरेको बाटोमा कुदिरहेको मोटरका लागि पिच बनाइदिए जस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
कृति तयारीमा लाग्दाको अवस्था बारेमा केही बताइदिनुहोस् न !
मैले कामना प्रकाशन समूहमा २०४९ सालदेखि पारिवारिक पत्रिका साधनामा सह–सम्पादकको हैसियतमा पत्रकारिता सुरु गरेको हुँ । यो पत्रिका खोजमूलक भएकै कारण म यसतर्फ आकर्षित भएको थिएँ । त्यस बेला विशेष गरी म स्वास्थ्य र सामाजिक विषयवस्तुका विविध क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर लेखहरु लेख्थेँ । त्यस बेला साधना पत्रिका निकै चर्चित र लोकप्रिय बनेको थियो । कस्तो प्रस्तुति पाठकहरुले धेरै मन पराउँछन् भन्ने त्यस बेला मलाई बोध हुँदै गयो । भविष्यमा आख्यान लेखनमा लाग्दा यो प्रस्तुति शैलीलाई अपनाउँछु भन्ने कुरा मैले त्यसताका नै मनमा राखेको थिएँ ।
पछि साधना पूर्णरुपमा स्वास्थ्य पत्रिकाका रुपमा प्रकाशित हुन थाल्यो । यसले मलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा गहिराइसम्म पुग्न सहयोग गर्यो । स्वास्थ्य, सामाजिक विषयवस्तु र पाठक मनोविज्ञानका सम्बन्धमा आफूले आर्जन गरेको ज्ञानलाई साहित्य लेखनमा उपयोग गर्ने अवसर खोज्दाखोज्दै लामो समय गुज्रिँदा पनि सफल नभएपछि मैले २०६९ सालदेखि केही वर्ष कामना प्रकाशनबाट अवकाश लिएँ र स्वतन्त्ररुपमा कथा लेखनमा लागेँ । साथै यस अवधिमा मैले चार जना वरिष्ठ चिकित्सकहरुको जीवनी लेखन कार्यमा पनि सहकार्य गर्ने अवसर पाएँ । यस अवधिमा प्रकाशित कथाहरुबाट मैले राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ । त्यसपछि प्रकाशकको समेत आग्रहमा थप नयाँ कथाहरु लेखेर यो कृति “मर्फिन” प्रकाशित हुन सकेको हो ।
“मर्फिन” नै किन लेख्नुभयो ? पाठकले किन पढ्ने ?
मैले अढाइ दशकभन्दा बढी समय स्वास्थ्य पत्रकारिता गरेँ । त्यसकारण पनि मलाई यस क्षेत्रका विविध विषय बुझ्ने अवसर मिल्यो । आफूलाई जुन क्षेत्रमा केही ज्ञान छ त्यही क्षेत्रमा कलम चलाउनु स्वाभाविक नै हो । स्वास्थ्य पत्रकारिता गर्दा विविध कारणले लेख्न नसकेका र लेखेर पनि गहिरो प्रभाव छोड्न नसकेका धेरै विषयहरु छन् । यस्ता विषयहरु उजागर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो । त्यसकारण पनि मैले यी विषयलाई कथामार्फत् पस्किने प्रयत्न गरेको हुँ ।
मर्फिन कडा खालको पीडा कम गर्ने एउटा औषधीको नाम हो । मानिसका मनमा भएका पीडाहरुको विरेचन गर्ने एउटा सशक्त साधन साहित्य हो । राम्रो साहित्यले मानिसको पीडा कम गर्न औषधीले जस्तै काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले पनि स्वास्थ्य विज्ञान साहित्यको मेरो यो पहिलो कृतिको नामाकरण “मर्फिन” हुन गयो ।
मैले बुझेसम्म साहित्यमा हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण भनेको मनोरञ्जन एवं आनन्दको अनुभूति हुनु हो । मर्फिनमा यो गुणलाई मैले आफ्नो बुझाइमा सशक्तरुपमा प्रस्तुत गरेको छु । साहित्यमा हुने अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको भावना र चेतनाको प्रखरता हो । मर्फिनमा यी दुवैलाई सँगसँगै डोर्याउँदै नयाँ प्रयोगका रुपमा जीवन उपयोगी पनि बनाउने प्रयत्न गरेको छु ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुदेखि आममानिसले भोग्नुपरेका समस्या, यस क्षेत्रका विकृति र विसंगति, चिकित्सा विज्ञानका क्षेत्रका उन्नति–प्रगति र भविष्यमा हुन सक्ने विकासको परिकल्पनासमेत समेटेर तयार गरिएको मनोरञ्जनपूर्ण यो कृति हाल बजारमा उपलब्ध नेपाली साहित्यिक कृतिभन्दा अलि भिन्न र फरक स्वादको भएकाले पाठकहरुलाई यसले भिन्नै आनन्दको अनुभूति गराउने छ ।
यौनको सस्तो प्रस्तुतिबाट सनसनीपूर्ण बनाउने लेखनशैलीबाट मर्फिनलाई मुक्त राख्ने प्रयत्न गरिएको छ । यस कृतिमा प्रस्तुत गरिएकोे कथानक, अपनाइएका भाषाशैली र कथाको अलि फरक संरचना शैलीका कारण कुनै पनि कथा पढ्दा पाठकले बीचमै छोड्नुपर्ने वा झर्को लाग्ने स्थिति आउने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ । अहिले पाठकहरु तथा समीक्षकहरुबाट प्राप्त गरिरहेको प्रतिक्रियाबाट पनि मैले यस्तै अनुभूति गरेकोले पनि पाठकहरुले यो कृति एकपटक पढ्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अबको साहित्यिक यात्राको योजना के छ ?
यससम्बन्धमा मैले केही सोचेर आधारभूमि तयार गरी बसेको छु । हालै बजारमा आएको मर्फिनप्रतिको पाठकहरु र समीक्षकहरुका प्रतिक्रियाहरु केलाएर आगामी यात्रा तय गर्नेछु ।
तपाईँको कृतिले “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार” प्राप्त गर्यो भने यसबाट प्राप्त नगद के गर्नुहुन्छ ?
निश्चय नै यो साहित्य क्षेत्रमा नै लगानी हुनेछ ।
२. नेपाल विद्याः केदार वाशिष्ठ
तपाईँको पहिलो कृति “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का लागि शीर्ष दश पुस्तकमा पर्यो । कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भलादमी निबन्धमा लेख्नुभएको छ, “…. अर्काको लेखमा हँस्सी उडाएर कलम सुताउने पाठक ….. भलादमी हुन् ।” भलादमी कहलिनेप्रति देवकोटाको यो व्यङ्ग्य साँच्चिकै मर्मस्पर्शी छ । कुनै पनि लेखकले लेखनमा कति पीडा खेप्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वयम् लेखकबाहेक अरुले अनुभूति गर्न सक्दैन र उसले अरुलाई त्यसबारे भनेर वा लेखेर बुझाउन पनि सक्दैन । त्यस्तै नियम उसले पाएको अथाह सुखानुभूतिमा पनि लागु हुन्छ ।
कुनै पनि कुरा लेख्नका लागि प्राप्त गर्ने सूचना र तथ्यलाई विश्लेषण गरी ज्ञानको गर्भाधान हुँदाको रोमाञ्चक अनुभूतिलाई म साहित्य सिर्जनाको गर्भाधानको सुखानुभूति भन्छु । हुनत म महिलाले गर्ने अनुभूतिबारे आधिकारिक रूपमा भन्न सक्दिन, त्यो मेरो कोरा कल्पना मात्र हुन्छ तथापि महिलाजस्तै र सर्जकलाई पनि म मातृस्थानमा राख्छु । अनि एक महिलाले आफ्नो गर्भाशयमा भ्रुणको गर्भाधान हुँदा जस्तो अनुभूति गर्दिहुन् त्यस्तै अनुभूतिसँग तुलना गर्छु म ज्ञानको गर्भाधानलाई । जसरी महिलाले गर्भाधान भएको भ्रुण छोरा वा छोरी के होला ? त्यसको पूर्ण विकास नभई स्वस्थ्य सन्तानको जन्म होला कि नहोला ? जन्मिएपछि उसको अवस्था कस्तो होला ? बढ्दै र पढ्दै जाँदा समाजमा उसको स्थान कस्तो होला ? आदि इत्यादि चिन्ता गर्छिन् मेरो विचारमा हरेक लेखकले आफ्नो सिर्जनाको भ्रुणको गर्भाधान हुँदा पनि यस्तै प्रश्नमा चिन्ता गर्दछ । यसरी म पुरुष हुँदाहुँदै पनि कृति सिर्जनाको गर्भाधानमा महिला गर्भाधान हुँदाको रोमाञ्चक र विश्मय दुवैको संयोजित क्षणको अनुभूति गर्नसक्छु तर त्यसको खुसी म यसरी भनेर वा लेखेर ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्दिन । तिनै आमाले आफ्नो सन्तानको सफलतामा जसरी गौरव अनुभूति गर्छिन् मैले पनि मेरो “नेपाल विद्या” “साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का लागि शीर्ष दश पुस्तकमा पर्दा त्यस्तै अनुभूति गरेको छु ।
के भन्छन् “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का…
साहित्यपोस्ट १५ बैशाख २०७८ १७:०१
के भन्छन् ‘साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार’का लागि छानिएका…
साहित्यपोस्ट १२ बैशाख २०७८ १७:०१
के भन्छन् ‘साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार’का…
साहित्यपोस्ट १० बैशाख २०७८ १७:०१
यसो भन्दै गर्दा मैले हालै मात्र दिवङ्गत हुनुभएकी मेरी आमा केदारकुमारी भट्टराईलाई सम्झेको छु । मैले “नेपाल विद्या” समर्पण गरेकी आमाले आफ्नो जीवनकालमा नै आफ्नो छोराको सिर्जना–सन्तानको यस्तो सफल सुखानुभूति गर्न सक्नुभएन भन्नेमा ग्लानी लागेको छ । तथापि “नेपाल विद्या” उत्कृष्ट दशमा पर्दा ममा भने हौसला र जिम्मेवारी दुबै बढेको छ । अर्थात् मैले नेपाल र नेपालीका लागि मैले थप काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको बोझ थपिएको पाएको छु । यस्तो सुखद् भारी बोकाइदिनु हुने पाठक, समीक्षक, मूल्याङ्कनकर्ता तथा पुरस्कारका संस्थापक र व्यवस्थापकलगायत सम्पूर्ण साहित्य पोस्ट परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु ।
“साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”को घोषणाले तपाईँको साहित्यिक यात्रासँग के सम्बन्ध राख्ला ?
जुनसुकै पुरस्कार वा सम्मानले लेखक/सर्जकलाई दिने हौसला र जिम्मेवारी जस्तै ममा पनि यसबाट ती दुबै थपिएको छ । मैले साँच्चिकै अरुले मूल्याङ्कन गर्न लायक काम गरेछु भन्ने बोध भएको छ । यस्ता कुराले लेखकीय ऊर्जा दिन्छन् । मैले मेरो पहिलो पुस्तकले नै मलाई त्यो ऊर्जा दिँदा मैले फेरि केही गर्नुपर्छ भन्ने बोध गरेको छु । नेपाल विद्या आफैमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको विधा निर्माण गर्ने विधा सिद्धान्त र प्रयोगमूलक कृति भएकाले अबका मेरा काम यस स्तरका होलान् कि नहोलान् भन्ने यकिनसाथ त भन्न सक्दिन । तर पनि मलाई नेपाल विद्याको स्याहार गरेर यसलाई आफै सक्षम बनाउने कार्यका लाग्न प्रेरित गरेको छ । यसका अतिरिक्त मलाई साहित्यका अन्य विधामा पनि लाग्न र मेरा फुटकर अनुसन्धानलाई पनि पुस्तकाकार रूप दिन हौसला दिएको छ ।
मैले नेपाल विद्या कुनै प्राप्तिको सपना देख्दै लेखेको होइन । त्यसको उल्लेख मैले “नेपाल विद्या”मा नै गरेको छु । म विद्यावारिधिको अनुसन्धान त्यागेर नेपाल विद्या लेखनमा लागेको हुँ । धेरैले मलाई नेपाल विद्यालाई नै शोध प्रबन्ध बनाएर उपाधि लिन वा पिएचडी क्लबमा प्रवेश गर्न प्रेरित नगर्नुभएको पनि होइन, तर मेरो उद्देश्य त्यसबाट कुनै प्राप्तिको थिएन ।
कृति तयारीमा लाग्दाको अवस्थाका बारेमा केही बताइदिनुहोस् न !
म पेसाले पत्रकार भएको हुनाले मेरो खेती सूचना र भाषाको हो । पत्रकारिताको करिब तीन दशकको यात्रामा भाषिक अध्ययनसमेत गर्नु मेरो रुचि थियो । त्यही अनुसार मैले स्नातकोत्तर तहमा लेखेको शोधपत्र भाषामा प्रविधि विषयको थियो जसले भाषा र सूचना प्रविधिका पक्षहरुलाई संयोजन गरेको छ । मैले सोही विषयलाई आधार मान्दै विद्यावारिधि उपाधिका लागि पनि तयारी गरेँ र पहिलेदेखिका सामग्री प्रयोग गर्ने गरी खोजी गर्दै त्यता लागेँ । मेरो विद्यावारिधि दर्ता पनि भयो तर विविध कारणले त्यता लाग्न मेरो मन मर्यो । मैले खोजेका सामग्री कुनै न कुनै रूपमा प्रकाशमा ल्याउनु नै थियो र मैले खोजीलाई अरु तीव्रता दिएँ । खोज्दै जाँदा यति अथाह सामग्री पाएँ कि कतिपय अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन गर्नु नै समस्या जस्तो हुन्थ्यो । नेपाली भाषाको ऐतिह्य खोज्ने क्रममा अरु पनि प्रशस्त सामग्री पाइए । बुद्ध र बुद्धस्थलहरुबारे हुने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र दावी गर्दा आम नेपालीले चित्त दुखाए झैँ मेरो मन पनि कटक्क हुन्थ्यो र यस्तो विवाद किन हुन्छ ? र किन यसको जरो कसैले खोतलेर उनीहरु (विदेशी) लाई जवाफ दिँदैन ? भनेर खोजी गर्न मन लाग्थ्यो । मैले भाषाको अध्ययन गर्दा यसलाई पनि खोजीको विषय बनाएर लागेको हुँ । त्यसपछि मात्र नेपाल विद्याको सिद्धान्त निर्माण भएको हो ।
“नेपाल विद्या” नै किन लेख्नुभयो ? पाठकले किन पढ्ने ?
माथि उल्लेख गरिएझैँ भाषिक पक्ष केलाउँदै गर्दा त्यसका पनि विभिन्न पाटा खुले । अनि बुद्धबारेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र व्यापारबारे पनि स्पष्ट आकृति आयो । त्यसले फेरि अर्को विषयको उजागर गरिदियो । नेपालबारे नखुलेका पाटाहरु धेरै छन् तर त्यसबारे हाम्रो अध्ययनमा केही कमजोरी छ भन्ने लाग्यो । अरू देशले आफै गरेका वा कुनै देशबारे अरूबाट गरिएका देशीय अध्ययनको पक्षमा हामी ज्यादै कमजोर रहेको पाएँ । अरू देशमा देशीय विद्या अध्ययनको परम्परा रहेकोमा हामी त्यसतर्फ लाग्ने जमर्को नै नगरेको देखेँ र त्यो अन्य देशको देशीय विद्या (चीन विद्या, भारत विद्या, इजिप्ट विद्या, आर्मेनियाली विद्या, जापान विद्या जस्ता) जस्तै नेपालको पनि विद्या अध्ययनको विधागत अभाव पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । नेपाल विद्या त शब्दकोशहरुमा पनि अझै छैन । त्यही अभावपूर्ति गर्न त्यसको सिद्धान्त निर्माणमा लागेको हुँ । मेरो भनाइ र नेपाल विद्या पुस्तक हेर्नुभयो भने पनि स्पष्टतः त्यसमा तीन खण्ड पाउनु हुनेछ ।
सबैभन्दा पछिल्लो खोजीको “नेपाल विद्या”को विधा निर्माण सिद्धान्त पहिलो खण्डमा छ । अनि सिद्धान्त मात्र निर्माण गरेर पुग्दैन त्यसको प्रयोग पनि देखाइ दिनुपर्छ भन्ने लागेर बुद्ध र बुद्धस्थलबारे “लुम्बिनी र कपिलवस्तुको राजनीतिक उत्खनन” र नेपाल र नेपालका भाषाहरु विशेष गरी नेपाली भाषाको ऐतिह्यमा “सिला खोजेको भाषा” गरेर थप दुई खण्ड बनाएको हुँ । पुस्तकाकार दिने बेला र प्रकाशनको तयारीमा भीमकाय हुने डरले तीन वटा बेग्लाबेग्लै पुस्तक तर एकैसाथ निकाल्ने कि एउटैमा राख्ने भन्ने विकल्प र दुविधा दुबै थिए मसँग । मैले के ठानेँ भने नेपाल विद्यालाई अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको बेग्लै विधा निर्माण गर्दा सिद्धान्त र प्रयोगले एक अर्कालाई सघाउने भएकाले मैले एउटा नै पुस्तक बनाएको हुँ । विषयवस्तु र पृष्ठका आधारमा पनि यी तीनवटै अलगअलग पुस्तक पनि हुन् । तीन वटा बेग्लाबेग्लै पुस्तक बनाएको भए “नेपाल विद्या”को उद्देश्य प्राप्ति अलि कमजोर हुने थियो कि भनेर “नेपाल विद्या” अहिलेको रूपमा आएको हो ।
जहाँसम्म पाठकले किन पढ्ने भन्ने प्रश्न छ त्यो मैले भन्ने होइन अब “नेपाल विद्या”ले नै भन्ने हो । नेपाल विद्या मबाट अब नेपाल र नेपालीको भइसक्यो । म त्यसका के छ भन्ने कुरा भने गर्नसक्छु र पुस्तक पल्टाएर वा म वा अन्य कसैले भनेका आधारमा पाठकहरुले रुचि वा अरुचिको विषय निर्धारण गरेर पढ्ने वा नपढ्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ।
लेखकले मेरो कृति पाठकले पढिदियून् भन्ने जबर्जस्त आग्रह गर्न थाल्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाल विद्यामा हालसम्म अप्राप्य नेपालका सम्पत्ति मैले दिएको छु । नेपाललाई अन्य देशको अध्ययन परम्पराको तुलनामा विशिष्ट अध्ययनको क्षेत्र व्यापक रहेको देखाइदिएको छु । यसमा नेपालको भूगोल, इतिहास, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, भाषा, व्याकरण, लिपि, संस्कृति, पुरातत्व, राजनीति, षड्यन्त्र, यात्रा, यात्रा विवरण वा साहित्य र अन्य धेरै विषय छन् । समग्रमा तिनले राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर विवाद निरूपणका लागि बहुस्रोतका आधारमा सत्यापन गर्दछन् । अन्य देशीय विद्या जस्तै “नेपाल विद्या” विधा निर्माणको सैद्धान्तिक पर्याधार त्यही सत्यापन रहेको छ । त्यसैले नेपालबारे नयाँ ढङ्गबाट बुझ्ने र अरुलाई पनि बुझाउन चाहने हरेक विषय क्षेत्रका विज्ञ र सर्वसाधारण अध्येताका लागि पनि “नेपाल विद्या” उपयोगी हुनसक्छ । यसलाई विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालयहरुले अपनत्व लिएर पाठ्यक्रममा राख्न सकिने गरी मैले विधा निर्माण गरिदिएको छु । त्यसका लागि नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरुमा अनुरोध पनि गरेको छु ।
मेरो पुस्तक साहित्यका अरु विधा जस्तो अलि छैन । त्यसैले योजनाबारे पनि ठ्याक्कै भनिहाल्न गारो होला । गैरआख्यान खोज अनुसन्धान समय र आर्थिक दुबै हिसाबले धेरै लगानी लाग्ने क्षेत्र हो । संयम र साधना यसका दुई पाङ्ग्रा हुन् तर असाध्यै ढिलो गरी चल्छन् । मेरो रुचि यसैमा रहेको र “नेपाल विद्या” विधा निर्माण गरेको हुनाले यसैलाई मलजल गर्नेमा लाग्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ । यसक्रममा तत्कालका लागि “लुम्बिनी र कपिलवस्तुको राजनीतिक उत्खनन” खण्डलाई बेग्लै पुस्तकका रूपमा र विश्व समुदायले बुझ्ने गरी अङ्ग्रेजी भाषामा निकाल्ने योजना छ ।
२०७८ को पूर्वाद्र्धमा नै त्यो आउने अपेक्षासाथ काम भइरहेको छ । तर सोचेजस्तो नहुने रहेछ भन्ने पाठ पनि मलाई “नेपाल विद्या” लेख्दाका छ वर्षभन्दा बढीका समयका दाँतीले सिकाएका छन् । २०७६ को अन्त्यतिर नेपालमा फैलिएको कोरोनाका कारण दुई पटक निगरानी (क्वारेन्टिन) मा बस्नुपर्दा “नेपाल विद्या” नै निकाल्न नसकी मेरो अर्कै यात्रा पो सुरु हुने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । र, कोरोनाको भन्दा पपिन यतिको समय र श्रम कसैले देख्न नपाउने गरी त्यसै विलय पो होला कि भन्ने डर हुन्थ्यो । तर कोरोनाकालले अलि फुर्सद पनि दिएकाले “नेपाल विद्या”ले २०७७ मा पुस्तकाकार ग्रहण गर्न पायो त्यो मेरालागि ‘म नेपालका लागि जन्मेको हुँ’ भन्ने सार्थक भएको क्षण थियो । “नेपाल विद्या” गुणैगुणले युक्त कृति हो भनेर पनि म दावी गर्दिन, त्यसमा थुप्रै कमजोरी छन् तर ती “नेपाल विद्या”का नभएर समय परिस्थितिका र मेरा व्यक्तिगत कमजोरी हुन् । “नेपाल विद्या” लेखनका लागि विभिन्न व्यक्तिबाट मलाई प्रदान गरिएका हौसला र हतोत्साहनसमेत दुबै “नेपाल विद्या”का लागि ऊर्जा बनेका छन् । जे जति छ “नेपाल विद्या”मा नै छ ।
“नेपाल विद्या” लेख्दै गर्दा र अरु बेला पनि नेपाली भाषामा खड्किएको शब्द निर्माणको परम्पराको खाडल पुर्ने अर्को विषयको सैद्धान्तिक अवधारण स्पष्ट भएको छ । त्यही “शब्दशाला”बारे र मुस्ताङको वैभवबारे पनि अध्ययन गर्ने रुचि छ । यसका साथै केही कथा लेखेको छु र केहीका प्लट छन् र कनिकुथी कविता पनि कोरेको छु तर सबैतिर लाग्दा कहिँ न कतैको पो हुन्छु कि भन्ने पनि चिन्ता छ ।
तपाईँको कृतिले “साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार” प्राप्त गर्यो भने त्यसबाट प्राप्त पुरस्कार राशि केमा सदुपयोग गर्नुहुन्छ ?
नेपाल विद्या साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कारबाट पुरस्कृत भयो भने मैले त्यसलाई पुरस्कार राशिभन्दा पनि सम्मानको रूपमा ग्रहण गर्नेछु । त्यसको केही अंश हाम्रा बुबा उद्धवप्रसाद भट्टराईले स्थापना गरी, स्वीकृति दिलाई अवकाश हुनेबेलासम्म योगदान गर्नुभएको भोजपुरको हालको पौवादुम्मा गाउँपालिकाको बस्तLमा रहेको श्री लक्ष्मीनारायण प्राथमिक विद्यालयका छात्रछात्रालाई हौसला दिन बुबाका नाममा स्थापना गरेको हाम्रो पारिवारिक अक्षय कोषमा लगाई आमाको समेत नाम जोडेर पूर्णता दिनेछु त्यही विद्यालयबाट मेरो विद्याको आरम्भ भएको हो र नेपाल विद्याको वीज पनि त्यसैबाट सिर्जना भएको हो । र, बचेको अरु साहित्यिक क्षेत्रमा नै लगाउने छु ।
३. रहर (कथासङ्ग्रह) : सुरेश बडाल
तपाईँको पहिलो कृतिले “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का लागि शीर्ष दश पुस्तकमा पर्यो । कस्तो अनुभूत गरिरहनुभएको छ ?
निश्चय नै यो खुसी बनाउने कुरा हो । आफूले गरेको कामको सराहना हुँदा साह्रै हर्षित छु ।
म साहित्यलाई प्रेम गरेर यही क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर लागिपरेको मान्छे हुँ । यसर्थ कुनै पनि लेखकको पहिलो कृतिलाई प्रदान गरिने यो पुरस्कारको मनोनयनमा पर्दा पक्कै पनि मलाई हौसला मिलेको छ । आफूले असल काम गर्यो भने त्यसको मुल्यांकन हुँदो रहेछ भन्ने महशुस भएको छ । यसले मलाई अझै धेरै सिर्जनाहरु गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ ।
कृतिको तयारीका दिनहरु साह्रै रोमान्चक छन् । आफूले कथाहरु लेखिरहँदाका बखत केही गज्जब लेखियो भन्ने लागेका क्षणहरुमा कहिले यो पुस्तक बनेर पाठकहरु समक्ष पुग्ला र आफूलाई झैं कसरी पाठकहरुलाई पनि उद्धेलित बनाउला भन्ने अनुभूति वर्णनातित छ ।
“रहर” नै किन लेख्नु भयो ? पाठकले किन पढ्ने ?
यो कृति मेरा आफ्नै अनुभूति र केही देखेका भोगेका घटनाहरुको कथाको स्वरूप हो । यसर्थ कुनै सुन्दर संसारमा कुनै कालखण्डमा रमण गर्दै कहिँ आफूझैं लाग्ने त केही आफैंले देखेझैं लाग्ने पात्रहरुसँग संगै हाँस्न वा सँगै खिन्न हुन यो कृति पढ्दा हुन्छ । साधारण लाग्ने कुराहरुबाट कुनै गहिरो कुरा भेटिन पनि सक्छ । ‘रहर’मा कुनै गहन दार्शनिक कुरा त छैन, तर कथामै कतै एउटा पात्रले भन्छ, ‘मान्छे त आफ्नै भोगाईले दार्शनिक हुँदो रहेछ’ । यसर्थ साधारण मान्छेहरुका कस्ता कथा हुन्छन् र तिनीहरु कसरी भनिएका छन् भनेर आख्यानको आनन्द लिन ‘रहर’ पढ्दा घाटा लाग्दैन ।
अबको यात्रा एउटा उपन्यासको छ । जुन सम्भव भयो भने यही साल आउन सक्छ ।
तपाईँको कृतिले “साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार” प्राप्त गर्यो भने यसबाट प्राप्त नगद के गर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो योजना त अहिलेसम्म केही बनाएको छैन । सायद लेखन पठनलाई नै सहयोग हुने ठाउँमा खर्च गर्छु होला ।
साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार
भित्तामा कविता अभियान १४
कविताः वनबिरालो र म